व्यस्त सडकमा यसरी नग्न हिडेपछि…. - Arghakhanchi Saptahik
Home Slider समाचार व्यस्त सडकमा यसरी नग्न हिडेपछि….
व्यस्त सडकमा यसरी नग्न हिडेपछि….
एजेन्सी । लण्डनको सबैभन्दा व्यस्त सडकमध्ये एक केसिंटोन सडकमा लगभग १० मिनेट जति एक मोडल टपलेस अर्थान् विना कपडा हिडिरहिन् । सुरुमा हेर्दा उनको शरीरको माथिल्लो भागमा टि–सर्ट लगाए जस्तो देखियो । तर, जब छेउछाउ रहेका केही व्यक्तिहरुले घोरिएर हेर्न थाले । उनले टप नलगाएको निर्णयमा पुगे ।
केली क्लेन नामकी यी मोडेललाई पेन्ट्स आर्टिस्ट सराह एटवेलले लगभग दुई घण्टाको लगातार मेहेनतपछि टपलेस रुपमा तयार पारे । त्यसपछि मोडेल १० मिनेटजति सडकको किनारमा न्युड भएर हिडिन् । यद्यपी, यो एक प्रयोग थियो । मोडल केलीलाई न्युड पेन्ट गरी त्यसरी हिडाउँदा कति मानिसले थाहा पाउन सक्छन् भन्ने बुझ्न यसो गरेको आर्टिस्ट सराहले बताएमका छन् ।
१० मिनेटको अवधिमा लगभग १९ जनाले पत्ता लगाए कि केलीले शरीरको माथिल्लो भागमा केही पनि लगाएकी छैनन् । यसअघि पनि केली र यही आर्टिस्टि मिलेर यस्तै गरेका थिए । त्यतिबेलाले केलीले माथिल्लो भागमा कपडा लगाएकी थिइन् भने तल्लो भागमा जिन्सको पेन्टजस्तै पेन्ट गरेका थिइन ।